Meixin Comb Burushka Sameeyaha Mashiinka Soo Saara
Shirkaddeennu waa shirkad teknolojiyad sare ah oo la aasaasay 2004.Waxaan ku takhasustay cilmi-baarista, horumarka iyo soo-saarista 2-5 axis hal-labo (mashiin) qashin-qubka midabka, CNC mashiinka tuubbooyinka mashiinka tuubbooyinka, CNC burush-gacmeedka mashiinka laba-laablaha madaxa, Mashiinka cadayga, mashiinka goynta, mashiinka goynta iyo mashiinka goynta, iwm.
Alaabooyinkeena ayaa si ballaaran loogu dabaqaa burush maalinle ah, cadayga korantada, burushka safarka, burushka, burushka cadayga, burushka shanlo shanlo, timaha timaha, wareega timaha wareega, burushka tinta, burushka timaha, burush timaha , warshadaha soosaarista burushyada korantada iwm. Waxaan sameyn karnaa mashiinka iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha.
Waxaan leenahay koox khibrad leh oo khibrad u leh horumarinta farsamada. Waxay diyaar u yihiin qaabeynta iyo soosaarida alaabada leh astaamo gaar ah iyo tafaasiil gaar ah.Now, waxaan haysannaa tikniyoolajiyada mashiinka lagu farsameeyo burushka badan, kartida naqshadeynta xoogan, waxaanan horumarineynaa nidaamka adeegga.